मंसिर ८ गतेको जनसभा प्रवक्ता प्रकाण्डले सम्बोधन गर्ने » खबरहरुको एउटै केन्द्र
मंसिर ८ गतेको जनसभा प्रवक्ता प्रकाण्डले सम्बोधन गर्ने
बुधबार, मंसिर ५, २०७५ २१:०७ मा प्रकाशित !
काठमाडौं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले मंसीर ८ गते पार्टी पनर्गठन दिवशको अवसरमा काठमाडौंमा आयोजना गरिएको जनसभाको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी दिएको छ । बुधबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरि प्रचारप्रसार उपसमितिका संयोजक चिरन पुनले जानकारी दिएका हन् ।
पार्टीका केन्द्रीय समिति सदस्य समेत रहेका पुनले जनसभालाई पार्टीका प्रवक्ता प्रकाण्डले सम्बोधन गर्ने जानकारी पनि दिए । पत्रकार सम्मेलनमा वितरण गरिएको प्रेस विज्ञप्तिअनुसार मंसीर ८ गते ११ बजे काठमाडौँका तीन ठाउँबाट जुलुस सुरु हुनेछ ।
काठमाडौंको गोङ्गबु बसपार्क, कालीमाटी र बबरमहलबाट जुलुस सहरका विभिन्न ठाउँ परिक्रमा गरी दिनको १ बजे रत्नपार्क–
शान्तिबाटिकामा पुगेर जनसभामा परिणत हुने जनकारी पनि पत्रकार सम्मेलनमा दिइएको थियो । जनसभामा पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रम, पार्टीको भावि योजनासँगै वार्ताबारे पार्टीको आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्ने नेकपाले जनाएको छ ।
पत्रकार सम्मेलनमा पुनले र्या‍ली र जनसभा भव्य र शान्तिपूर्ण हुने जानकारी समेत दिए । उनले केही पक्षले जनसभाबारे गलत रुपमा हल्ला गरिरहेको बताउँदै भ्रमको पछाडि नलाग्न अाग्रह समेत गरे । पार्टी पुनर्गठन भएदेखि नै खुला र जनतामाझ रहेको बताउँदै संयोजक पुनले नेकपालाई भूमिगत भन्नु हस्यास्पद भएको बताए ।
नेकपाले पार्टी पुर्नगठनलाई दिवसको रुपमा मनाइरहेको छ । साताव्यापी विविध कार्यक्रमसहित नेकपाले जिल्ला-जिल्लामा प्रदर्शन, जुलुस, कोणसभालगायतका कार्यक्रम गरी दिवस मनाइरहेको नेकपाले मंसिर ८ गते काठमाडौंको शान्तिवाटीकामा विशाल जनसभा गर्न लागेको छ । जनयुद्धको क्रममा २०५८ मंसिर ८ गते नै जनमुक्ति सेना गठन भएको थियो । यही सन्दर्भमा नेकपाले पार्टी पुर्नगठनसँगै विविध कार्यक्रम गर्दै अाएको छ ।
PREVIOUS POST Previous post: मन्त्रीहरुको काममा प्रधानमन्त्री असन्तुष्ट, मन्त्रालयहरुको कामको समीक्षा ३ दिनसम्म
NEXT POST Next post: जनसभा गर्न नदिए सरकारलाई नै घातकः लोहनी
बस दुर्घटना, एकको मृत्यु, आधा दर्जन बढी घाइते बुधबार, मंसिर ५, २०७५ २१:०७
प्रधानन्यायाधीशमा चोलेन्द्रशमशेर जबराको नाम सिफारिस बुधबार, मंसिर ५, २०७५ २१:०७
नेकपाले न्यूरोडमा लगायो डोजर, यस्ता छन् ६ कारण बुधबार, मंसिर ५, २०७५ २१:०७
निर्वाचित रेशमलाई जेल कोचेर ठूलो अन्याय : नेतृ हिसिला यमी बुधबार, मंसिर ५, २०७५ २१:०७
निर्मला हत्या प्रकरणः प्रदीप-विशाल पनि दिलिपजस्तै ‘नक्कली’ अभियुक्त ? बुधबार, मंसिर ५, २०७५ २१:०७